မောင်တောမြို့နယ်သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် အမြင့် ပျမ်းမျှ ၁၀ ပေတွင် ရှိသည်။ အရှေ့ဘက်ရှိ မေယုတောင်တန်းရှိ အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်သော မင်္ဂလာတောင်မှာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ပေ ၁၀၀၀ ခန့်မြင့်သည်။
မောင်တောမြို့နယ်အတွင်းတွင် တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ် စသော အဆင့်မြင့် ပညာရေးကျောင်းများ မရှိပေ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ စာရင်းများအရ မောင်တောမြို့နယ်တွင် အထက်တန်းကျောင်း ၇ ခု၊ အထက်တန်းကျောင်းခွဲ ၉ ခု၊ အလယ်တန်းကျောင်း ၁ ခု၊ အလယ်တန်းကျောင်းခွဲ ၁၄ ခု၊ မူလတန်းလွန်ကျောင်း ၉၅ ခု၊ မူလတန်းကျောင်း ၅၈ ခုနှင့် မူလတန်းကြိုကျောင်း ၁ ခု တည်ရှိသည်။
မောင်တောမြို့နယ်တွင် ကုတင် ၅၀ ဆံ့ မောင်တောမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ ၁၆ ကုတင်ဆံ့ တောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့ဆေးရုံ နှင့် ၁၆ ကုတင်ဆံ့ တိုက်နယ်ဆေးရုံ ၃ ရုံ ရှိသည်။ မြို့နယ်အတွင်း ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန ၁၀ ခု၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၁၉ ခု တည်ရှိသည်။
↑ (မေ ၂၀၁၅) သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ, ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်ထောင်စု သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာ အတွဲ-၂. နေပြည်တော်: လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန, ၆၀။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ ၃.၄ ၃.၅ ၃.၆ (အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇) မောင်တောမြို့နယ် ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ. မောင်တောမြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန။ ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မောင်တောမြို့နယ်&oldid=413943" မှ ရယူရန်
၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၀၄:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၀၄:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။